Iphasiwedi ikhusela usetyenziso lwakho nge-AppLocker | Ndisuka mac
Iphasiwedi ikhusela iiapps zakho ngeAppLocker
Kungenzeka ukuba unayo iMac enye ekhayeni lakho, lonke usapho luyisebenzisa ngeakhawunti yomsebenzisi eyahlukeneyo, kodwa ukuba sinomntwana omncinci kusenokwenzeka ukuba okwangoku asikhethanga kwenza iakhawunti yomsebenzisi ethile kubo Ke iya kusebenzisa eyethu ukubukela iividiyo kwiYouTube okanye ukonwabela omnye umdlalo esiwufakileyo. Ingxaki iza xa udiniwe kwaye uqala ukusebenzisa usetyenziso ngaphandle kwemvumelwano okanye isizathu, ke inani lamaxesha onokuthi usitsalele umnxeba liqale ukucaphukisa, malunga konke ukuba umbono wokumshiya uMac kukusivumela siphumle.
Ngethamsanqa kwiVenkile ye-Mac App sifumana usetyenziso lwe-AppLocker, isicelo esivumela ukuba sibhloke zonke usetyenziso okanye iinkonzo zenkqubo usebenzisa igama eliyimfihlo, ukuze kuthi ngengozi nawuphi na umsebenzisi acofe kuyo, ibhokisi yesicelo iya kuvela icela thina ukuze iphasiwedi ikwazi ukufikelela kuyo kwaye uyiqhube. Ukusebenza kwesicelo kulula kakhulu, kuba kufuneka siyiqhube okokuqala kuphela, ngenisa igama eliyimfihlo kunye nokongeza usetyenziso esifuna ukubhloka kuluhlu.
Esi sicelo silungile ukuba sisebenza kwiprojekthi eofisini kwaye asifuni namnye umntu esisebenza naye ukuba akwazi ukufikelela kuso ngokuthintela ngokuthe ngqo ukwenziwa kwesicelo esivumela ukuba sijonge okanye sihlele. I-AppLocker iyafumaneka ukhuphelo simahla ngokuthenga ngaphakathi nohlelo esivumela ukuba sivule yonke imisebenzi. I-AppLocker ikwisiNgesi, ingaphezulu nje kwe-6MB ngobukhulu, kwaye ifuna iMacOS 10.11 okanye kamva kunye neprosesa engama-64.
Ukuba ufuna ukuvavanya ukusebenza kunye nokhuseleko olubonelelwa sesi sicelo, kuya kufuneka ucofe kwikhonkco endishiya apha ngezantsi.
I-AppLocker (ii -apps zokutshixa iphasiwedi)Mahala
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Iphasiwedi ikhusela iiapps zakho ngeAppLocker
Le nguqulo ikuvumela ukuba uvimbe usetyenziso olunye. Ukuba ufuna ukuyenza ngaphezulu kwesinye, kuya kufuneka uphume nge- € 10,99. Kutheni ungatsho kwinqaku eli kwaye siphephe ukuchitha ixesha ??.
Kuya kufuneka usebenze kumanqaku ngakumbi
Ummi waseJuca sitsho
Ngaba ikhona usetyenziso olufanayo lwe-iPad?
Phendula kubemi baseJuca
Yonwabela iNkqubo ka-Apple 6 kunye neNkqubo yesi-7 kwi-Mac yakho
I-8 × 36 I-Podcast: Iveki enye ukuya kwi-WWDC 2017